Lahatenin'Andriamatoa Praiminisitra Ntsay Christian nandritra ny lanonam-pifamindram-pahefana | Primature
Lahatenin’Andriamatoa Praiminisitra Ntsay Christian nandritra ny lanonam-pifamindram-pahefana
6 juin 2018 14 juin 2018
« Tompokolahy sy Tompokovavy,
Ny voalohan-teniko dia mankasitraka antsika rehetra tonga amin’izao maraina izao. Mankasitraka manokana ny Praiminisitra ny tenako noho ny ezaka efa vita nho an’ny tombontsoam-pirenena, indrindra indrindra ny toe-tsaina izay nananany mba hahafahantsika miroso amin’izao dingana izao ao anatin’ny fitoniana. Izay fitoniana izay dia anisan’ny zavatra tadiavin’ity firenena ity amin’izao fotoana izao. Raha ny laharam-pahamehana dia ikambanantsika: ny fifidianana izay ho avy, ao anatin’ny fahalalahana, fifidianana madio ary fifidianana mangarahara. Ny zavadehibe dia mila fomba fitantanana vaovao isika, mila fomba fiaraha-miaas izay mety hanatsara bebe kokoa ny fanohizana ny ezaka fa indrindra indrindra ny fahafahantsika hahazo vokatra ao anatin’ny fotoana fohy.
Eto amin’ny fandraisako fitenenana amin’izao fotoana izao, dia mahatsiaro manokana ny tenako ireo izay namoy ny ainy tao anatin’izao toe-draharaha izao, ireo izay nitondra takaitra tao anatin’izao toe-draharaha izao. Mino sy manantena isika fa ireny zavatra nanjombona tamin’ny fiainam-pirenena ireny dia ho fanoitra iray mba hahafahantsika mitondra izao firenena izao ao anatin’ny fandraisan’ny rehetra anjara, ao anatin’ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay ka ny tombontsoa izay tratrarintsika ao anatin’izany dia tsy misy afa-tsy ny tombontsoam-pirenena. Ka eto aho dia manao antso avo, ho an’ny vahoaka Malagasy ny tenako, mba hampanjaka ny fifankatiavana, hampanjaka ny fahaizana miara-monina, hampanjaka ny firaisankina.
Voalazako tamin’ny teny frantsay teo, ny fisaorako an’ Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara izay nanendry ny tenako ho Praiminisitra. Fa isaorako manokana koa Andriamatoa Andry Rajoelina, izay nanolotra ny tenako ho Praiminisitra. Mankasitraka anareo rehetra tomponandraikitra ara-politika ny tenako, amin’ny fahatsiarovan-tena; ao anatin’izany ny députés sy ny tomponandraikitra maro isankarazany mba hahafahantsika miroso amin’ny fifidianana malalaka, madio, mangaraharaha. Tsy haiko ny tsy hisaotra manokana ireo mpiara-miombon’antoka amintsika ny fanomezan’izy ireo tànana ary mbola nanomezan’izy ireo tànana antsika Malagasy, dia mampitràka antsika izany. Izany rehetra izany dia tsy vita raha tsy ao ny fifandraisana izay tokony tena akaiky, kanefa kosa ao anatin’ny fanajana ny firenena amin’ny maha firenentsika. Hoezahiko, hiezaka isika rehetra hanandratra ity firenena ity, ary indrindra indrindra hitondra azy ao anatin’izao fotoana sarotra izao, amin’ny fahafahantsika hanana voka-pifidianana izay eken’ny be sy ny maro.
Mankasitraka Tompokolahy, misaotra Tompokovavy.”
← FANAMABARANA NATAON’ANDRIAMATOA PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER
Discours du Premier Ministre entrant, Christian Ntsay, lors de la passation du mercredi 06 Juin 2018 →
Lahateny fanolorana ny fandaharan’asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana
Lahatenin’Andriamatoa Praiminisitra nandritra ny lanonam-panokafana ny taom-piasana 2019-2020 eny anivon’ny Akademia Malagasy